Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguAdrienne
Le suite yeendwendwe ithandekayo, eqaqambileyo, ezizimeleyo ibekwe kwindawo egqibeleleyo kumgama nje omfutshane wokuya echibini elihle laseKalamalka (ulwandle, ikhefi, i-pub kunye ne-SUP/irenti zebhayisekile), i-Okanagan Rail Trail, kunye nemizuzu eli-10 yokuqhuba kuzo zonke iindawo. izinto eziluncedo kwidolophu yaseVernon.
Ukunceda iindwendwe zizive zikhuselekile ngakumbi, ngoku sishiya isithinteli seyure ezingama-24 phakathi kokubhukisha, kunye nokucoca zonke iindawo zokuchukumisa ukongeza kukucoca kwethu rhoqo.
Idama lethu elingafudumeziyo livaliwe ngexesha lonyaka.
I-700 sq ft, i-suite elungele usapho iquka indawo yokungena yabucala kunye nepatio, indawo yokupaka eyaneleyo, iTV kunye nokufikelela okungenamkhawulo kwisantya esiphezulu se-intanethi engenazingcingo, kunye nokusetyenziswa kwendawo yokuhlala apho unokonwabela ukujonga inkwenkwezi kunye neembono zezilwanyana zasendle zasekhaya.
Kwakhona kuyafumaneka kwiindwendwe kukufikelela kwiyadi yethu engasemva kunye nephuli-nceda ujonge kwiMithetho yeNdlu kwizikhokelo ezitsha ze-COVID-19 malunga nokucwangcisa ukusetyenziswa kwechibi.Iindwendwe nazo ziyakonwabela ukusetyenziswa kwebhafu eshushu kuphela ngexesha lokuhlala kwazo (ekwiyadi ekwabelwana ngayo ngasemva).
Amalungiselelo okuLala: Ibhedi enye yokumkanikazi kwigumbi lokulala kunye nesofa yecandelo eguqulelwa kwibhedi ephindwe kabini kwigumbi lokuhlala.
Ikhitshi: Ifriji, uluhlu, i-microwave, i-oven ye-toaster, iKeurig, iketile, iitreyi ze-ice cube, imbiza yeti, izitya, i-cutlery, izitya zokuphakela, iimbiza, iipani kunye nezinto zeplastiki ezisetyenziswa echibini.Sikwabonelela ngesepha yesitya, ikofu, iti, umgubo ocoliweyo, kunye neswekile.
Igumbi lokuhlambela: Igumbi lokuhlambela elinye elikhulu elineshawa kuphela (akukho bhafu), isepha yesandla, isomisi seenwele, ukuhlamba umzimba, kunye neshampu/iconditioner.
Indawo yokuhlamba impahla: Iwasha/isomisi esipheleleyo, i-ayina kunye nebhodi yoku-ayina, iitawuli ezongezelelweyo, iitawuli zamanzi, kunye nezinto zokulala ezongezelelweyo.
Ikhaya lethu kukuhamba kwemizuzu emi-5 ngaphezulu komphezulu othe tyaba okanye ukuhamba ngemizuzu emi-2 ukuya eKalamalka Lake kunye nekhaya kwiilwandle ezininzi ezinkulu.IKal Beach kunye neCosens Bay Beach, elele kanye entliziyweni yeKalamalka Lake Provincial Park.
Ehlotyeni njengoko eli chibi lifudumala, icalcium carbonate, okanye ilimestone (eshiywe yimikhenkce edlulileyo), ibumba iikristale ezibonisa ukukhanya kwelanga.Oku kukhokelela kuluhlu olumangalisayo lwemibala eluhlaza okwesibhakabhaka, eluhlaza kunye ne-turquoise. Xa eli chibi liphola ebusika iikristale ziyanyibilika kuze kubuye umbala oqhelekileyo.
Ngaselunxwemeni lwechibi ungalindela ukufumana i-Alexander's Pub, i-Rail Trail Cafe (irenti yebhayisekile) kunye ne-Kalavida Surf Shop (irenti yebhodi yokukhwela).Ivenkile yeSurf ilikhaya kuMnyhadala woNyaka weKalamalka Classic SUP.
Kuwe iindwendwe eziloba iintlanzi eziphambili ekujoliswe kuzo yiLake Trout, iRainbow Trout kunye neKokanee.Eli chibi linokubonelela ngendebe enkulu kakhulu elingana neLake Trout ephakathi kwe-15 ukuya kwi-20 yeeponti kunye neyona inkulu yethu ibe yi-36 yeeponti!Ukuba indebe yile nto uyikhangelayo ezona nyanga zibalaseleyo ngu-Okthobha ukuya ku-Epreli.
I-Okanagan Rail Trail, eyibhedi endala kaloliwe ukusuka eColdstream ukuya eKelowna inqanaba elisezantsi lokuhamba kwinqanaba lechibi okanye ukukhwela ibhayisekile kwaye ifikeleleka ngokulula kwindawo yethu.
Le mitsalane ilandelayo kuhambo olufutshane ukusuka kwindawo yethu:
IPlanethi yeeFama yobusi kunye neMeadery
Vernon Golf kunye Country Club
INtaba yeSilver Star (ukuhamba intaba, ukukhwela ibhayisekile, ukutyibiliza, ukutyibiliza, ukukhwela ikhephu)
Eminye imizuzu engama-30 phantsi kwendlela ukusuka kwindawo yethu:
Kelowna kunye neLake Country
Oyama kunye neZip Line
Iindlela zamanzi ezidumileyo e-Enderby (i-kayaking kunye nemilambo edadayo)
I-Shuswap kunye ne-houseboat renting
Abamkeli bakho uGus noAdrienne bahlala kwisiza kwaye bayafumaneka ukuze baphendule imibuzo.
U-Adrienne uya kunxibelelana nawe ngaphambi kokufika kwakho ukuze aqinisekise iinkcukacha zokujonga.